4 Ụzọ Iji nyere gị aka Bibie nke Ugboro ugboro iCloud Sign-Na rịọ
1.Re-Tinye paswọọdụ dị ka Rịọrọ
2.Log Ọ na-abanye n'ime iCloud
3.Check na Email Address maka iCloud na Apple ID
4.Change System Mmasị & Tọgharia Accounts
Na ị dị naanị-eme nchọgharị na ozi ọma na gị iOS ngwaọrụ mgbe na mberede, a window Pop elu nke-acha anụnụ anụnụ na-arịọ gị ịbanye gị iCloud paswọọdụ. Ị keyed na paswọọdụ, ma window popping elu minit ọ bụla. Mgbe ị ga-kpaliri isi na gị iCloud paswọọdụ mgbe ị na-ịbanye n'ime gị iCloud akaụntụ (paswọọdụ gị na-adịghị azọpụta ma ọ bụ na-echeta dị ka gị ọzọ akaụntụ) na mgbe ị na-akwado gị ngwaọrụ, a nwere ike ịbụ manụ na bothersome.
E nwere ọtụtụ nke Apple ọrụ na enwetawo a, ya mere ọ bụghị nanị gị. Nsogbu ahụ na-kasị eleghị anya mere site a usoro update ie ị na-emelite gị femụwe si iOS6 ka iOS8. Ọ bụrụ na ị na-ejikọrọ na a WiFi netwọk, ọzọ ekwe omume n'ihi na ndị a persistent paswọọdụ kpaliri nwere ike mere site a oru glitch na usoro.
4 Common Solutions ka idozi nke
iCloud bụ a dị oké mkpa complementing ọrụ maka gị Apple ngwaọrụ na ejikari, ihe iOS ọrụ ga-ahọrọ a Apple ígwé ojii ọrụ dị ka mbụ ha nchekwa nhọrọ ndabere ha data. Mbipụta na iCloud pụrụ ịbụ ihe na-enweghị isi orie ụfọdụ, ma ọrụ ekwesịghị iyi n'elu ya. Nke a na nke na-ekwughachi iCloud log na kpaliri ga-edozi site na isoro ole na ole dị mfe nhọrọ dị ka depụtara n'okpuru.
Part 1 Re-Tinye paswọọdụ dị ka Rịọrọ
Mfe usoro bụ re-aba gị iCloud paswọọdụ. Otú ọ dị, n'ụzọ kwụ ọtọ abanye ya n'ime mmapụta elu window abụghị ngwọta. Ị ga-eme ndị na-esonụ:
Nzọụkwụ 1: Gaanụ n'ime Ntọala
Gaa gị iOS ngwaọrụ "Setting" menu na pịa "iCloud".
Nzọụkwụ 2: Tinye paswọọdụ
Ọzọ, n'ihu na nd o-abanye gị adreesị email gị na paswọọdụ iji zere nsogbu si ugboro ugboro ọzọ.
Part 2 na-apụ na-abanye n'ime iCloud
Mgbe ụfọdụ, mbụ nhọrọ ie nd o-abanye nbanye gị nkọwa ga idozi mgbakasi nke. Kama nke ahụ, na-egbu osisi nke iCloud na-egbu osisi na ọzọ nwere ike ịbụ a mma nhọrọ maka gị. Iji na-agbalị usoro a, ihe niile ị chọrọ ime bụ ịrụ na-esonụ:
Nzọụkwụ 1: Banye si iCloud
Na gị iOS ngwaọrụ, eme ka ụzọ gị ya "Mwube" menu. Chọta "iCloud" njikọ na pịa na "pụọ" button.
Nzọụkwụ 2: Reboot gị iOS ngwaọrụ
The reboot usoro a makwaara dị ka a ike nrụpụta. I nwere ike ime nke a site na ịpị "Home" na "Ụra / Tetanụ" buttons n'out oge ruo mgbe ị emesị hụ Apple logo-egosi na ihuenyo.
Nzọụkwụ 3: Banye azụ n'ime iCloud
N'ikpeazụ, mgbe gị na ngwaọrụ malitere na buut kpamkpam, ị nwere ike re-aba gị Apple ID na paswọọdụ ọzọ banye iCloud. Ị kwesịrị ị na-esi manụ kpaliri ọzọ mgbe usoro a.
Nkebi nke 3 Lelee Email Address maka iCloud na Apple ID
Ọzọ kwere omume mere na iCloud nọgidere na-apostle ị re-Tinye paswọọdụ gị bụ na i nwere ike keyed dị iche iche ikpe nke gị Apple ID n'oge gị iCloud nbanye. Ka ihe atụ, gị Apple ID nwere ike niile na-uppercase mkpụrụ akwụkwọ abịchịị, ma ị keyed ha na lowercase akwụkwọ ozi mgbe ị nọ na-agbalị abanye n'ime gị iCloud akaụntụ na ekwentị gị ntọala.
The mismatch nwere ike mfe edozi site n'ime otu n'ime abụọ nhọrọ n'okpuru:
Nhọrọ 1: ịgbanwe gị iCloud adreesị
Chọgharịa site gị iOS ngwaọrụ "Mwube" ma họrọ "iCloud". Mgbe ahụ, dị nnọọ nd-aba gị Apple ID na paswọọdụ ya.
Nhọrọ 2: ịgbanwe gị Apple ID
Yiri nke mbụ nhọrọ, ịnyagharịa ka "Mwube" ngalaba nke gị iOS ngwaọrụ ma melite gị adreesị email gị n'okpuru "iTunes & App Store" nbanye nkọwa.
Nkebi nke 4 ịgbanwe System Mmasị & Tọgharia Accounts
Ọ bụrụ na ị ka nwere ike tufuo nke, ọ bụ ihe kasị ikekwe na-abụghị gị hazi gị iCloud akaụntụ n'ụzọ ziri ezi. Kwesịrị, technology na-eme ka ndụ anyị mmehie free, ma ha pụrụ mgbe ụfọdụ ime ka anyị ụfọdụ nsogbu. Ọ bụ mee ka gị iCloud na ndị ọzọ na ndekọ bụghị mmekọrịta kwesịrị ekwesị ma na-onwe ha muddled elu.
Ị nwere ike na-agbalị ikpochapụ akaụntụ na ibidogharịa ha dị ka n'okpuru:
Nzọụkwụ 1: Gaa "System Mmasị" nke iCloud na Doro Anya All Akọrọ
Iji tọgharịa gị iCloud usoro mmasị, na-aga Ntọala> iCloud> System mmasị na delink ọzọ ihe ndekọ na syncs na gị iCloud akaụntụ. Ọ bụ uru na nleta ka ọ bụla ngwa n'okpuru Apple na nwere na syncing nhọrọ na iCloud iji hụ na niile na-aka nke iCloud.
Nzọụkwụ 2: Tinye akà rà All igbe Ọzọ
Ozugbo niile ngwa nwere nkwarụ si syncing elu na iCloud, na-aga azụ n'ime "System Mmasị" na nne Mmetụta ihe niile azụ ọzọ. A na-enyere na ngwa ọdịnala ka mmekọrịta ya na iCloud ọzọ. Ọ bụrụ na ihe bụ nsogbu abụghị ofu, gbalịa na-ekpeghachi n'elu nzọụkwụ ọzọ mgbe i restarted gị iOS ngwaọrụ.
> Resource> iCloud> 4 Ụzọ Iji nyere gị aka Bibie nke Ugboro ugboro iCloud ịrịba ama-na rịọ